အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့သော ဘ၀တစ်ခု၏ ရာဇ၀င်: အချစ်၏ဒဿန (သို့) အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေခြင်း
အချစ်၏ဒဿန (သို့) အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေခြင်း
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, March 16, 2009 in ကျွန်တော်ဇာနည်ရဲ့အတွေး
ကျွန်တော် ဇာနည် ဟာအချစ်ကိုခံပဲခံစားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။အချစ်ကိုဘယ်သောအခါမှအဓိပ္ပယ်မဖွင့်ဆိုခဲ့ဖူးပါဘူး။ဒီတစ်ခါတော့
ကမ္ဘာကြီးအတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်ကိုအဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုမှုဟာ ကျွန်တော့်အထင်တော့ဟုတ်သလိုလိုရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးလေးနဲ့ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဒီ အချစ်ဒဿန လေးကိုဝေဖန်ပေးကြပါအုံးနော့်
အချစ် နှင့် အမုန်း ကို
တရားသူကြီး။ ။အမုန်း မောင်မင်းမှာကမ္ဘာမြေကနေ အချစ် ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အကြောင်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြသနိုင်လောက်သေသက်သေ
တရားသူကြီး။ ။အချစ် မောင်မင်းအနေနဲ့ကရောကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုပေးနိုင်သလဲ????
တရားသူကြီး။ ။အမုန်း မောင်မင်းဟာဒီကမ္ဘာကြီးကနေအချစ်ကိုမောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်များ
တရားသူကြီး။ ။မောင်မင်း အချစ် ကရော အမုန်းရဲ့ တင်ပြချက်အပေါ်ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
အချစ်။ ။ဟုတ်ကဲ့ အမုန်းပြောသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်ဟာဘာမှအသုံးမကျသလိုကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။တကယ်တော့
အချစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၁၀၀၁ ညပုံပြင်လောက်တောင်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးဂုဏ်ဖော်ပြစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အထင်ကရနေ ရာတွေတိုင်းမှာကျွန်တော့်စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့ခြေရာတွေဟာလည်းကျွန်တော့်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအတွက်
တရားသူကြီး။ ။ဒုန့်း့ရုံးတော်ကိုခေတ္တခဏရပ်နားမယ်။။။။နေ့လည်နေကိုတိမ်ဖုံးတဲ့အချိန်မှာစီရင်ချက်ချမယ်။(နာရီမပေါ်သေးသဖြင့်)
တရားသူကြီး။ ။အဟင်း အဟင်း အဟွင်း အဟမ့်း
လိုက်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်။အပြစ်ဒဏ်အား အခါအားလျှော်စွာလျှော့ရက်များအားခံစားခွင့်မပြုပါ။
ထိုအဖြစ်အပျက်အပြီး ၁ နှစ်ခန့်ကြာသော့်
အမုန်း။ ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လူတွေဟာလည်းအချစ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် အမုန်း ကိုလည်းအယုတ်မာကြီးလို့ထင်မြင်
အချစ် ကပဲပြောပြပေးနိုင်မှာမို့ အချစ် ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးစေလိုပါတယ်။အချစ်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မျိုး အမုန်း ရဲ့
ပြည်သူလူထု။ ။အချစ်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်ပေးပါ့့ ဗျို့ ဗျို့ ဗျို့ ဗျို့ ဗျို့
ပြည်သူလူထု။ ။ဟေး ဟေး ဟေး ဟေး
တို့တိုင်ပင်ပြီး အချစ် နဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ အလွမ်း ကို အချစ်ရဲ့ ရာထူးကိုပေးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းလာတာဟာယနေ့
ဒါကြောင့်ယနေ့အထိကမ္ဘာပေါ်မှာ အချစ် တာဝန်ယူထားသူဟာ အချစ်အစစ် မဟုတ်ပဲ အလွမ်းကယူထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက် အလွမ်းဟာသူ့အကျင့်မပျောက်သေးပဲ အချစ် တာဝန်ကိုယူနေရင်းကနေမှ အလွမ်း လေးကိုကြားထဲမှာထည့်ထည့်ပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ အလွမ်း ဟာ အချစ်စစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ အချစ်စစ် ကိုအခုအထိမတွေ့သေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုကတော့ရှိနေပါသေးတယ့်ကကယ်၍ အချစ်စစ် ကိုများတရားသူကြီးမင်းက အင်တာနက်(အခုခေတ်ရောက်ပြီဆိုတော့အင်တာတက်သုံးနေပြီလေ့ဟီးဟီး)ကနေရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့့
အချစ်နဲ့ပက်သက်ပြီးကျွန်တော် ဇာနည် ရဲ့အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်မှာ comments လေးတစ်စောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးခဲ့ကြမယ်
ဆိုရင် ကျွန်တော် ဟာလက်ညောင်းရကျိုး ဦးနှောက်ခြောက်ရကျိုး နပ်ပြီး အလွန်ပဲပီတိဖြစ်မိမှာအမှန်ပါခင်ဗျာ့ :D
Sein Lyan says:
သေချာတာတစ်ခုက အချစ်ဆိုတာ ဘယ်ကိုမှထွက်သွားလေ့မရှိပါဘူး..
တစ်ခုခု ရဲ့ ပယောဂကြောင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံရသူဖြစ်နေပါတယ်..
အလွမ်းက လဲ အမုန်း နဲ့ သူငယ်ချင်းယောက်ဖတော်ပါတယ်..
အမုန်း နဲ့ အလွမ်း နဲ့ ညီပါတယ်..
ရွာပတ်ပြီး အချစ် ရှာပေးခဲ့ပါတယ်..
March 17, 2009 at 5:56 AM
အချစ်ဆိုတာ အမုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပုန်းနေတယ်လေ... အချစ်နဲ့ အမုန်းဆိုတာ ကျောနဲ့ရင်ချင်း ကပ်လျက်မှာ ရှိနေကြတဲ့ အရာတွေပါ... အချစ်ကိုရှာနေရင် တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး... တစ်သက်လုံး ရှာလည်း တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မရှာဘဲနဲ့ သူ့အလိုလိုရောက်လာတာမှ အချစ်စစ်... အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းရင်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်စစ်ကို ရှာမတွေ့ဘူး ပြောကြတာပေါ့... လူတွေက ကိုယ့်နှလုံးသားထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အချစ်ကိုကျတော့ မေ့နေကြတာ... ဒီလိုမေ့နေကြလို့ အလွမ်းတွေ ဖြစ်တည်လာတာ။ အလွမ်းတွေများလာတော့ အဆွေးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် လွမ်းဆွေးတယ် လွမ်းဆွေးတယ်လို့ ပြောပြောနေကြတာပေါ့ဗျာ....
chocolate like love
အချစ်စစ်ဟာ သူ့ကိုတရားစီရင်စဉ်က လူတွေအကြောင်းကိုသိသွားတယ်ဗျ အဲဒါကြောင့်အချစ်က သူအမှန်တကယ် ယုံကြည်ရတဲ့လူဆီကိုဘဲ ရောက်လေ့ရှိတော့တယ်လေ ဒါတောင်အလည်သဘောနဲ့ဗျ
သိပ် ဟုတ်တာပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်လေးကတည်းကအချစ်စစ်ကိုရှာဖွေ့နေခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့အချစ်စစ်ကိုမတွေ့မိသေးပါဘူးကျွန်တော်အချစ်ကိုပဲတွေ့ချင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်နှလုံးသား က အလွမ်းနဲ့အမုန်းကိုကြောက်လို့ပါ
အခုထိပဲဆိုပါတော့ ကျွန်တော်ကတော့ချစ်ပဲလို့တယ်ထင်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က အေးချမ်းခြင်းကိုပဲလိုလားလို့ပါ ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကတော့မှန်မယ်ထင်တယ်ဗျ
August 30, 2013 at 8:05 AM
ဆိုသော မိန်းကလေးမှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူ
မဟုတ်ပါ။ ဒေး ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့် post
တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်
ကျွန်တော့် ဇတ်ကောင်တွင် ပါရှိနေတတ်
သော ဒေး မှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူ နာမည်
မဟုတ်ပါ ထို့အပြင် ကျွန်တော် ကြိတ်ခိုက်
နေသောမိန်းကလေးလဲ မဟုတ်ရပါ ထို
ဒေး ဆိုသောမိန်းကလေးမှာ ကျွန်တော့်
ပတ်ဝန်းကျင် အတွင်းတွင် လုံးဝလုံးဝ
မရှိကြောင်းအများ သိစေရန် ကြငြာချက်
please download here Zawgyi myanmar font
အချစ်ဆုံးအတွက် နှင်းဆီ တစ်ခင်း
ဂုဏ်ရည်တူတဲ့လား ဒေး ရယ့်
ချစ်သူလား? ရည်းစားလား? သေသေချာချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ...
တုံးလုံး နဲ့ စပွင်း
ကြီးတော် နဲ့ ပြောရဖို့ အုတ်လိုင်း ကို တွယ်တတ်နေကြရ...
လားရှိုးမြို့၏ချစ်သူပုံပြင် လာရှိူးအလွမ်းပြေလားရှိူးတက္ကသိုလ်အကြောင်းရေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအခုလားရှိူးကိုမပြန်ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဓါတ်ပုံလေးကို တေ...
အမြဲတမ်းအလျှော့ပေးတော့ ကမ်းတတ်ချင်လာတယ် တစ်ခါတစ်လေတော့လဲအနိုင်လိုချင်မိတယ်။ ******************************** ဖုန်းစပီကာကနေ ...
ကျွန်တော် ဇာနည် ဟာအချစ်ကိုခံပဲခံစားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။အချစ်ကိုဘယ်သောအခါမှအဓိပ္ပယ်မဖွင့်ဆိုခဲ့ဖူးပါဘူး။ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော့်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအချစ်...
အကယ်၍ အင်းးးးတကယ်လို့ပေါ့ နင်သာငါ့ကိုခါးခါးသီးသီးငြင်းခဲ့ မယ်ဆိုရင် ငါအချစ်ကိုမထိတွေ့ဖူးရုံကလွဲလို့  အခုလိုအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြောက်ရ ...
တစ်ခါက.... လူတစ်ယောက်ဟာ ချောက်ထဲကျတော့မဲ့ မြည်းတစ်ကောင်ရဲ့အမြီးကို ဆွဲပြီးချောက်နှုတ်ခမ်းပေါ် ကိုဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားနေသတဲ့..။ ဒါပေမဲ့...မြည်းက...
ဟုတ်တယ်မှတ်လား ငါ့အတွက်ပဲငါကြည့်တယ်လို့နင်ထင် နေတယ် ဟုတ်တယ်မှတ်လား ငါကချစ်သူတစ်ယောက်မပီသဘူးလို့နင်ထင်နေတယ် ဟုတ်တယ်မှတ်လား ငါကနင့်ထက်သူငယ်ချ...
အချစ်ဦး “လူဆိုတာအချစ်ဦးကိုမမေ့တတ်ကြဘူး”တဲ့။ ထိုစကားကို ကျွန်မ ကောင်လေးတစ်ယောက်ထံ မှစကြားဖူးသည်။ ထိုကောင်လေး ၁၆ နှစ်အရွယ်က ဖုန်းထဲမှနေ၍ ၂...
ဇာနည် သေပြီ့ဟုတ်တယ် သူ့ဘဝကြီးရေစုန်မြောသွားပြီ့အရိုးပြာအိုးရေစုန်မြောသလိုပဲလေ သူ့ဘဝကြီး ရေစုန်မြောသွားပြီ။အလိုက်သင့်လေးပဲ သေဆုံးသွား...
ကီး ကြောင် နေ တဲ့ ကျွန် တော့် အ တွေး ကျွန်တော် ဟာအတွေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ အရင်ကဆိုအားနေရင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို အခေ...
အမှတ်တရ သင်္ကြန် " ပန်း ခင်းကြီးထဲရောက်သလို ဖြူနီပြာဝါရောင်စုံ......သကြန်မယ်တွေ ဟိုမှာကြည့် " အပြင်ဘက်မှာ သီချင်းသံတွေကပျံ့လွင့်...
ကျွန်တော့် Gtalk nick ပါ
GTalk အကြောင်းသိကောင်းစရာ (8)
music ကဏ္ဍ (3)
ကျေးဇူးတင်လွှာ ကျွန်တော့်အားပါရမီမပါပဲဝါသနာအရယခုကဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ရန်ကျွန်တော်၏နောက်ကွယ်မှပံ့ပိုးကူညီ ပေးသူများအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...... ဖြိုးဇာနည်
ကျွန်တော်၏ Blogအားလာရောက်လည်ပတ် ကြသောသူငယ်ချင်းများအားအထူုးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။Post အသစ်များကိုကြိုးစားပြီး ဆက်လက်တင်ဆက်သွားပါမည်။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ့
Copyright © 2009 အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့သော ဘ၀တစ်ခု၏ ရာဇ၀င် All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.